I-A350 Pack Rudder Animation
Umbuzo I-A350 Pack Rudder Animation
Usuku lwe-1 usuku lwe-1 olwedlule #1290 by I-Dietmar
Ngifake i-A350 yakho kulesi sixhumanisi: www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/6/890 , okubonakala kubonakala
inguqulo yakamuva yalo modeli esigabeni se-Rikoooo DLL. Imodeli enhle kakhulu yangaphandle, noma kunjalo kubonakala sengathi izithombe ezihamba phambili
hhayi ukuthi ifakwe emodeli. Ngabe ngibheka kabili imodeli ngethuluzi lokuguqula i-model elibonisa konke
izithombe ze-model, futhi ayikho izithombe ezihambayo zokuhamba. Ingabe lokho kuzobekwa?
Njengamazwana engeziwe mayelana nephaneli le-2D elisekelwe ku-A321. Ngicabanga ukuthi lokhu akukwazi ukubonakala njengesisombululo salesi simodeli esihle.
Isibonisi se-F18 HUD asihambisani nanoma iyiphi iphaneli le-Airbus. Kunezinhlobo ze-HUDs zamahhala zamahhala ezitholakalayo ezingekho ezempi
amamodeli angaphumelela kangcono kuphaneli le-A350 2D. Nokho, lokhu kuyisiphakamiso nje.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: cactus1123
izinyanga 11 4 Sekwedlule amaviki #1292 by I-Dietmar
Nginguye yedwa owazile le nkinga? Okungenani i-Rikoooo kufanele iphendule ngoba kuhlangothini lwewebhu le-DLL latshelwa
ukuthi zonke izingxenye ezibandakanya i-rudder ziphikisiwe. Ngaphezu kwalokho, uma ngicindezela inkinobho ye-CONTACT ngithola le MSG:
Ngakho-ke, ngithola kanjani oxhumana naye kumthuthukisi we-model? Angizange ngithole oxhumana naye ngeposi. Ngabe ngibheka izinto?
Isikhathi ukudala page: 0.786 imizuzwana